Published: December 30, 2015 12:08 PM
काठमाडौं । सन् १९९६ को ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहमा एकजना त्यस्तो ब्यक्तिप्रति पनि भावपूर्ण श्रद्धान्जली दिईएको थियो जो एटलान्टामा जन्मेका अमेरिकाका प्रख्यात विश्वब्यक्ति थिए । उनी नागरिक अधिकारवादी नेतामात्रै नभई अमेरिकाको स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानका लागि लड्दा लड्दै मरेका ब्यक्ति थिए । उनी अर्थात्– डा. मार्टिन लुथर किंग । ...
क्षितिजको चन्द्रमा ठूलो किन देखिन्छ ?
Published: December 30, 2015 08:52 AM
काठमाडौं । क्षितिजमा चन्द्रमा सामान्यभन्दा ठूलो देखिन्छ । चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने कक्ष पूर्ण बृताकार हुँदैन, यो अण्डाकारको हुन्छ । त्यसैले चन्द्रमा पृथ्वीको कहिले ३ लाख ६३ हजार किलोमिटर नजिक आउँछ त कहिले ४ लाख ५ हजार ५ सय किलोमिटर टाढा जान्छ । चन्द्रमा पृथ्वीको सबैभन्दा टाढा भएको बेलाभन्दा नजिक हुँदा करिब ११ प्रतिशत ठूलो देखिन्छ । तर चन्द्रमा...
प्रकाश कसरी अन्तरिक्षमा हिँड्छ ?
Published: December 29, 2015 16:12 PM
काठमाडौं । ब्रम्हाण्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिज विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र हो । यो चारैतिर पुग्छ । यसले परमाणुलाई एकैठाउँमा बाँध्ने काममात्र नभई इलेक्ट्रोन जस्तो परमाणुको सानो कणको सहयोगमा विभिन्न परमाणुलाई बाँधेर विद्युतीय प्रवाह पनि बनाउँछ । हाम्रो संसार यही विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रको सहयोगमा थुप्रै प्रकारका परमाणुहरु मिलेर बनेको हो । हामी मान्छेजस्तै...
दोश्रो विश्वयुद्धको इतिहास यस्तो छ, यसरी बने अमेरिका र सोभियत संघ ‘महाशक्ति राष्ट्र’
Published: December 24, 2015 16:56 PM
काठमाडौं । विश्वका ६१ देश र एक अर्ब ७० लाख मानिस सामेल भएको दोश्रो विश्वयुद्ध इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र भयानक युद्ध हो । सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको यो युद्धमा साढे ५ करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये ३ करोड निहत्था सर्वसाधारण नै थिए । दोश्रो विश्वयुद्धमा मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी रुसी नागरिक थिए । यही एउटा युद्धमा दुई करोड रुसी नागरिक मारिएका...
त्यसो भए समाप्त हुन्छ त पृथ्वीमा जीवन ! कुन ग्रहमा छ जीवनको सम्भावना ?
Published: November 18, 2015 13:21 PM
काठमाडौं । पृथ्वीमा जीवन छ किनभने जीवन अनुकुल वायुमण्डल छ अनि पानी पनि छ । जीवनको लागि वायुमण्डल हुनु जरुरी छ । लामो समयदेखि मानिसले पृथ्वीबाहेक ब्रम्हाण्डका अन्य स्थानमा समेत जीवन भएको हुन सक्ने अनुमान गर्दै आएका छन् । १९ औं शताब्दीमा खगोलशास्त्रीहरुले पनि चन्द्रमामा बुद्धिमान प्राणीहरु हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेका...
Published: October 6, 2015 14:14 PM
काठमाडौं । सामान्यतया छिटो–छिटो खाँदा, तातो खानासँग चिसो हल्का पेय पदार्थहरु लिंदा, धेरै पिरो वा मसलादार खानेकुराहरु खाँदा, जोडले हाँस्दा र अल्कोहल धेरै पिउँदा बाडुली लाग्ने गर्छ । हाम्रो छाती र पेटलाई छुट्याउने भागमा एउटा पातलो मासुको झिल्ली हुन्छ । हामीले सास लिंदा त्यो फैलिन्छ र सास फेरेपछि पहिलेकै अवस्थामा...
Published: October 5, 2015 10:31 AM
काठमाडौं । काठमाडौं । काठमाडौं । हाम्रो शरीरको बिभिन्न भागमा रहेको कोठीको बारेमा छुट्टाछुट्टै धारणा रहेको छ भने अन्धबिश्वास पनि रहँदै आएको छ । यदि...
यसरी भयो होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतिको उत्पत्ति र विकास
Published: September 11, 2015 10:26 AM
काठमाडौं । होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतिको उत्पत्ति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतिका नामुद चिकित्सक डा.हैनीमैनले गरेको इतिहास छ । सन् १७५५ अप्रिल १० तारिखका दिन जर्मनीको सैक्सन राज्यको माइसेन शहरमा फ्रेडरिक सैम्युअल हनीमैनको जन्म भएको थियो । उनका बुबा माटोको भाँडो बनाएर आफ्नो परिवारको जीविका निर्वाह गर्दथे । हनीमैनको जन्म...
Published: September 2, 2015 16:45 PM
काठमाडौं । पहिला–पहिला मानिसहरु कुनै व्यक्तिको तस्वीर उतार्नुपर्‍यो भने हातैलै उसको आकृति कागज वा कपडामा उतार्थे । यसमा जुन व्यक्तिको चित्र तयार पार्नुपर्ने हो, त्यो व्यक्ति कलाकारको अगाडि घन्टौंसम्म पनि एउटै मुद्रामा बसिरहनुपथ्र्यो । उक्त कार्य कठिनमात्र नभएर झर्कोलाग्दो पनि हुन्थ्यो । यसरी बनाइएको आकृतिमा लियोनार्दो द भिन्सीले बनाएको मोनालिसाको...
सुर्तीको सुरुआत कसरी भयो, कसरी–कुन रुपमा शरीरमा हुन्छ असर ?
Published: August 28, 2015 19:32 PM
काठमाडौं । आजभन्दा हजारौं वर्ष अघिदेखि नै मानिसहरुले सुर्तीलाई धुम्रपान वा खैनीको रुपमा खान वा सेवन गर्न थालिसकेका थिए । सुर्तीखेतीको सुरुआत सबैभन्दा पहिले करिब ६ हजार वर्षअघि उत्तर तथा दक्षिण अमेरिकाबाट भएको थियो । सुरुमा युरोप तथा एसियाका मानिसहरुलाई अमेरिकाबारे जानकारी थिएन ।चौथो शताब्दीमा स्पेनका क्रिस्टोफर कोलोम्बस त्यहाँ पुगेपछिमात्र...
निरंकुश राजा लुई सोह्रौंको टाउको काटियो, यसरी भयो विश्वमै पहिलो राजतन्त्रको अन्त्य
Published: August 21, 2015 15:44 PM
काठमाडौं । सन् १७९२ को जनवरी १२ विश्वकै इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण दिन थियो । त्यही दिन विश्वका एकजना निरंकुश राजा ‘लुई सौह्रौं’को टाउको काटिएको थियो । एउटा युगको अन्त्य भएर नयाँ युगको सुरुआत भएको थियो ।विश्वको इतिहासमा यो क्रान्ति ‘फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति’को नामबाट परिचित छ । यही क्रान्तिपछि नै विश्वका अरु देशमा...
Published: August 14, 2015 12:56 PM
काठमाडौं । आदिमकाल, जसलाई हामी ‘जंगलीयुग’ पनि भन्छौं । त्यो बेला मानिसहरुबीच पनि कुनै भेदभाव थिएन । धनी, गरिब, भन्ने कोही थिएनन् । उच्च जात र तल्लो जात भन्ने थिएन भने नारी–पुरुषबीच कुनै विभेद पनि थिएन । त्यतिबेला व्यक्तिगत सम्पत्तिको ‘जन्म’ भइसकेको थिएन । न निजी जमिन थियो, न त घर नै । न पैसा न गहना, न त कुनै सम्पत्ति...
Published: August 13, 2015 12:30 PM
काठमाडौं, श्रावण २८ । अफ्रिका । हो एक समय अन्धकारको महादेश भनेर कहिलिएको महादेश । बहुसंख्यक काला जातिहरुको बासस्थान । नदी नाला तथा बिबिध जीवजन्तुहरुकले भरिपूर्ण अपार जङली भूभाग भएको महादेश । संधै युद्ध र भोकमरीको समाचार बनिरहेको महादेश हो अफ्रिका । तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ र अचम्म लाग्न सक्छ अफ्रिका त सम्पूर्ण...
कहिले खेलियो पहिलो पटक फुटबल, अनि किन झुम्मिन्छन दर्शक ?
Published: August 9, 2015 13:03 PM
काठमाडौं, श्रावण २४ । संसारकै सबैभन्दा बढी दर्शक बटुल्ने खेलको रुपमा परिचित फुटबल । संसारका हर कुनामा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल यही हो । शारीरिक स्फूर्ति, उन्नत खेल कौशल तथा अनुशासित खेल संयोजनको आवश्यकता पर्ने फुटबल खेललाई बालकदेखि बृद्धसम्म सबैले उत्तिकै रुचाउने गरेको पाईन्छ । फुटबलको इतिहास खोतल्ने हो भने अत्यन्तै रोचक तथ्यहरु फेला परेका छन् । यो खेल प्राचीन ग्रिकहरुले...
यस्तो छ शेक्सपियरको जीवनी
Published: August 5, 2015 17:23 PM
काठमाडौं । ‘काम गर्नमा महान बन कुराभन्दा बढी काम गर’ !यी भनाइ राख्ने व्यक्तित्व हुन्–अंग्रेजी साहित्यका उज्जवल नक्षत्र विलियम शेक्सपियर । विश्व साहित्यको इतिहासमा उत्कृष्ट नाटकहरु रचना गरेर आफ्नो पृथक पहिचान बनाउन सफल शेक्सपियरको जीवन–यात्रा संघर्ष नै संघर्षले भरिएको छ ।...